Abakhiqizi nabaphakeli be-SARS-CoV-2 Abathathi hlangothi | I-Immuno
Isetshenziselwe i- I-SARS-CoV-2 Neutralizing Test Antibody Rapid
Ukupakisha 20 kits test / Ukupakisha ibhokisi50 amabhokisi / Usayizi weCarton Carton: 64 * 44 * 39cm
Ukuhlolwa okusheshayo kokutholakala kwekhwalithi yamasosha omzimba athena amandla ku-SARS-CoV-2 noma imigomo yayo egazini lonke, i-serum, noma i-plasma.
2. Uhlu lwabamhlophe baseChina livume umkhiqizi wamakhithi wokuhlola we-COVID 19 kanye ne-SARS-CoV-2 Neutralizing Test antibody Rapid (COVID-19 Ab)
A. Ukuhlolwa kwegazi, igazi eliphelele ngomunwe liyasebenza.
B. I-Cutoff ingu-50ng / mL
C. Kulula ukusebenza, akukho okokusebenza okwengeziwe okudingekayo ukusebenzisa i-assay
D. Isifanekiso Esincane siyadingeka. I-10ul ye-serum, i-plasma noma i-20ul yegazi lonke yanele.
1) Letha isikhwama ekamelweni lokushisa ngaphambi kokuvula. Susa idivaysi yokuhlola esikhwameni esivaliwe bese uyisebenzisa ngokushesha okukhulu.
2) Beka idivayisi yokuhlola endaweni ehlanzekile neqondile.
Bamba i-dropper ubheke phezulu, udwebe isibonisi ufike kulayini wokugcwalisa (cishe u-10 μL), bese uthumela isampuli kwisibonelo (S) sedivayisi yokuhlola, bese ufaka amaconsi ama-3 we-buffer (cishe i-120 mL) bese uqala i-timer . Bona umfanekiso ongezansi. Gwema ukubamba ama-bubbles emoyeni ku-specimen well (S).
Ukuze usebenzise okokudonsa: Bamba okokudonsa ume mpo, udwebe isibonisi esingu-0.5-1 cm ngenhla komugqa wokugcwalisa, bese udlulisa amaconsi ama-2 egazi lonke (cishe ama-20 µL) kwisiphethu (S) sedivayisi yokuhlola, bese ufaka amaconsi amabili we-buffer (cishe ama-90 uL) bese uqala isibali sikhathi. Bona umfanekiso ongezansi.
Ukusebenzisa i-micropipette: Ipayipi bese ukhipha ama-µL angama-20 egazi eliphelele kwisiphethu (S) sedivayisi yokuhlola, bese ufaka amaconsi ama-3 we-buffer (cishe u-120 µL) bese uqala i-timer. Bona umfanekiso ongezansi.
3) Linda ulayini (imibala) onemibala uvele. Funda imiphumela ngemizuzu eyi-10. Ungahumushi umphumela ngemuva kwemizuzu engu-15.
- Okuhle (+)Kuvela umugqa ongu-C kuphela, noma ulayini ongu-T ulingana no-C noma ubuthakathaka kuno-C. Kukhombisa ukuthi kune-SARS-CoV-2 yokuqeda ama-antibody ku-specimen.
- Okubi (-): Kokubili umugqa we-T no-C uyavela, lapho ukuqina komugqa we-T kunamandla kuno-C umugqa. Kukhombisa ukuthi awekho amasosha omzimba athobisa i-SARS-CoV-2 kwisampuli, noma-ke isihloko se-SARS-CoV-2 sokuvikela amasosha omzimba asezingeni eliphansi kakhulu.
- AkuvumelekileUmugqa wokulawula wehluleka ukuvela. Ivolumu yesenisi enganele noma amasu wenqubo angalungile yiwo kakhulu
Langaphambilini I-COVID-19 Neutralizing Test Antibody Rapid
Olandelayo: Ishidi Lokuhlola i-COVID-19 Antigen Sheet
Ukuhlolwa kwe-antibody kwe-COVID-19
ukuhlolwa kwegm antibody
i-antibody yokuhlola esheshayo